Cilmi Baadhid Ku Saabsan Cudurka Joonis-ka (Cagaarshawga) | Xarshinonline News
Cilmi Baadhid Ku Saabsan Cudurka Joonis-ka (Cagaarshawga)
Cilmi baadhid ku saabsan Cudurka Joonis-ka…..Beerka waxaa ku dhaca cuduro badan, waxaana ka mid ah cudurka la-yidhaado Joonis-ka ama (Cagaarshow-ga). Hebataytis-ku ama Joonisku waxa uu u kala baxaan dhawr nooc oo kala ah *Hebataytis A, B, C, D iyo E* .
Cagaarshow ma aha cudur ee waa calaamad ka mid ah calaamadaha lagu garto infection-ka beer-ka ama hebataytis-ka, waana marka indhaha, maqaarka, kaadida iyo saxarada qofku ay cagaar noqdaan.
Joonis-ka oo dhami waxa ay leeyihiin calaamada lagu garan karo kuwaas oo kala ah:indhaha iyo maqaarka oo midab Hurdiya yeesha, daal, calool xanuun, Cuntada oo kaa xidhanta iyo lalabo, shuban iyo matag.
Dadka qaarkiis waxaa laga yaabaa in aan lagu arkin calaamadahaas ilaa Xanuunku ama jirado ay meel xun gaadho. Tan kale, sida la i sugu gud-biyo Virus-ta cudurka Jooniska keentaa aad ayey u kal kala duwanyihiin taas ayaana u baahan in aad looga taxadiro.
HEBATAYTIS A iyo Sida uu u fido:
Waxaa la isugu gudbiyaa marka cuntada iyo biyaha ay fadareeyaan ama ku qasmaan saxaro ka timid qof qaba cudurka. Way yartahay in cudurka la- isugu gudbiyo dhicana dhiiga.
Yaa khatar ugu jira in Joonis uu ka dhaco
Dadka Socdaalka badan, dadka ku nool meesha uu Hebataytis A uu ku badan yahay, dadka saaxibo la ah dadka qaba cudurka, meelaha caruurta lagu xanaaneeeyo marka cudurka uu dilaaco iyo dadka kuwa irbadaha la isku muddo wadaaga.
Sidee looga hortegi karaa Jooniska
Talaal. Waxaa jira talaalka hebataytis A. Waxaa kale oo wanagsan in la-iska ilaaliyo biyaha fadaraysan iyo in la ilaaliyo nadaafada guud.
Dawada: Inta badan qofka wuu iska bogsada dhowr Todobaad ka dib.
HEBATAYTIS B (Hepatitis B):
Sida loo kala Qaado:
Virus-ka waxaa laga helaa dhecaanka qofka qaba hebataytiska sida candhuufta,
dhiigga, shahwada iwm. Viiruska waxaa la-isugu gudbiyaa marka dhecaanka qof sida Viruska ay gaadhaan dhecaanka qof aan qabin Cudurka. Hooyada waxay u gudbin kartaa Ilmaheeda xiliga dhalmadada, dadka waa weyna waxay isugu gudbiyaan marka ay sameeyaan isutag (sexual contact), ama ay Irbad wadaagaan. Hebataytis B la-isuguma gudbin karo dhinaca biyaha, cuntada ama wada kulan caadi ah sida meelaha shaqada, iskuulaadka ama dukaamada.. Dhiig laga qaada qofka ayaa sheegi kar in Hebataytis B uu qabo iyo in kale.
Ka hortagga Joonis-ka nooca Hebataytis B
Cudurku ka hortag ayuu leeyahay. Talaal ayuu leeyahay. Tan kale waa muhiim in
la-iska ilaaliyo wax allaale iyo wixii keeni kara Virus-ka. Waa in uu isku muddaa
qofkii la kulmay qof qabo cudurka hebataytis B waxa afka qalaad la yidhaahdo Immune Globuling muddo hal Week-ah ama ka yar. Waxa la-isku muddaa talaalka hebataytis B
Seddex Irbadood oo talaalka ah ee lagaga hortago hebataytis B. Talaalku waa amaan.waxa talaalku wax u tarayaa oo kaliya Qofkii aanu hore ugu dhicin Cudurku.
Dawada: waxaa lagu daaweeya Alpha Inferon or Lamivudine.
HEBATAYTIS C iyo Sida uu u fido:
Virus-ka waxaa la isugu gudbiyaa marka dhecaanka qof sida Virus-ka ay gaadhaan dhecaanka qof aan qabin fiiruska. Caadi ma aha in hooyada ay u gudbiso Ilmaheeda xiliga dhalmadada, ama dadka marka ay sameeynayaan isutag (sexual contact).
Dadka intiisa badan calaamado ma laha laakiin qaar ayaa waxay dareemi karaan daal, lalabo iyo indhaha iyo maqaarka oo cagaar noqda (jaundice). Waxaa lagu garan kara in qofka uu qabo cudurka iyada oo la-iska qaado dhiig. Inta badan dadka uu ku dhaco hebataytis C waxaa ku dhaca Cansar-ka beerka.
Dawada: waa iyada oo la qaato Interferon taas oo u baahan in dhakhtar loo taago Virus-ka qaar wali lama oga in ay keenaan hebataytiska waxaana lagu magacaabo ( non A….E) Hebataytis Ama Hebataytis X.
Waxa soo Diyaariyey soona Tarjumay.
← Hargeysa: Maayar Jiciir oo Qurbe-jooga Somaliland xog-waran ka siiyay wax-qabadkiisa
Uganda wants peacekeepers to take on Somali rebels →